Soo saaraha ugu fiican ee soo saaraha biibiilaha dhoobada iyo Warshad | Gimarpol
Ulaha layliga ah ee la duubay waxaa badanaa loo isticmaalaa godka qarxinta, godka ilaaliyaha, xoojinta buuraha, barroosinka iyo godadka kale ee injineernimada ee miinooyinka, qashin, jidadka sare, jidadka tareenka iyo wixii la mid ah. Waxay leedahay nolol dheer. cadaadiska foorarsiga sare, ka wareejinta tamarta durbaanka ka daloolista dhagaxa illaa qoditaanka qodidda ka dibna dhagaxa.
Horumarkayagu wuxuu kuxiran yahay qalabka sare, hibada wanaagsan iyo awoodaha teknolojiyadda ee sida joogtada ah loo xoojiyay ee Warshada Xirfadleyda ee Shiinaha Te Threaded Ends Longitudinal Submerged Arc welded Carbon Steel tuuboyinka API5l / ASTM A252 / ASTM A53 / En10219, Wax dhibaato ah oo isgaarsiin ah nagama haysatid. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiisha adduunka oo dhan inay nala soo xiriiraan iskaashiga shirkadaha.
Warshad Xirfadle ah oo loogu talagalay Dhuumaha Birta Shiinaha, LSAW, Waxyaabo badan ayaa si buuxda ula jaan qaadaya tilmaamaha ugu adag ee tilmaamaha caalamiga ah iyadoo adeegyadeena heerka gaarsiinta heerka ugu horeeya aad bixin doontid iyaga waqti kasta iyo goob kasta. Sababtoo ah Kayo waxay ka shaqeysaa dhammaan qalabka difaaca, macaamiisheennu maahan inay waqti ku lumiyaan inay wax ka iibsadaan.
Waxyaabaha: Birta Daawaha Dhismaha
Codsiga: Tunnel, Qarax, Macdanta, Quarrying, Piling, Indutrial water-well, iyo Kaabayaasha Dhismaha
Fududeeyaha iyo Bolting, Bench Drilling, Qodista Waxsoosaarka, Qoditaanka god dheer
Nooca dunta: H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60 ， ST58, ST68
Nooca Ulaha: Udhigga Dheeriga ah, Udubka Drifter, Usha MF, MF Drifter ul, Tuubo Hanuun, Usha Daloolin Taabasho, Mashiinka Mashiinka Isku-dhafan,
Nooca Jirka: Nooca laba-geesoodka ah, Nooca wareega
Length Rod: 260mm ~ 6400mm
CustomDesign: Mawjadda, Ballaca, Dhererka, Midabka ayaa loo habeyn karaa
Foomka iskuxirka: nooca isku xirka dunta, nooca iskuxirka laba jibbaaran, nooca iskuxirka laba geesoodka
Xarkaha Flat: Φ34.0mm, Φ42.0mm, Φ50.0mm
Batoonka furaha: Φ63.5mm, -73.0mm, Φ89.0mm
Nooca isku xidhka laba jibbaaran: F24, F.26, F30, F32
Nooca isku xidhka laba-geesoodka: B34, B35, B41, B45, B55, B41-B42.5, B48-B49
Goobta dalabka: Ku habboon dhismaha qodista godka qoto dheer oo leh xaalado juqraafiyeed oo ka sarreeya dhexdhexaad adag.
Qaybta ugu weyn ee tuubada layliga waxay ka sameysan tahay tayooloji tayo sare leh oo dhuxul bir ah oo bir ah, iyo isku xirka tuubada layliga waxaa laga sameeyay bir qaabdhismeed tayo sare leh. Waxaa lagu soo saaray iyada oo loo marayo sameynta-cadaadis sare, daaweynta faakiyuumka, alxanka khilaaf, iyo guud ahaan adkeynta dusha sare. Falanqaynta dunta waxay isticmaashaa qalab casri ah oo qalab otomaatig ah si wax ku ool ah loogu hubiyo in mid kasta Xaqiijinta wax soo saarka ee shey kasta. Waxay leedahay astaamaha xoogga foorarsiga sare, alxamida adag iyo waxtarka dheecaanka oo sarreeya. Marka la barbardhigo alaabooyinka la midka ah, xoogga daalka iyo xoogga xiirashada si weyn ayaa loo hagaajiyaa.
Naqshadeynta qaabdhismeedka qaabdhismeedka daab-wareegga ayaa leh dalabyo ballaaran oo ballaaran oo loogu talagalay qodista xaaladaha jiyooloji. Naqshadeynta qaabdhismeedka qaanso-wareegga sare waxay ku habboon tahay dhismaha qodista godka qoto dheer oo leh xaalado juqraafiyeed oo ka sarreeya dhexdhexaad iyo adag, iyo qaabeynta qaabdhismeedka baallad hoose oo hoose waxay ku habboon tahay xaaladaha juqraafiyeed ee jilicsan iyo kuwa jilicsan. Qodista xayiraadda dhuxusha iyo qodista dheecaanka gaaska. Waxay leedahay astaamaha dheecaanka slag wax ku ool ah, heerka daloolka qoditaanka sare oo aan sahlaneyn in la dhejiyo.
Hore: Dhagaxtuur dhagax gacmeed lagu qabto
Xiga: Dhuunta dhuunta dhuxusha